> Resource > Windows > Sidee inuu ka soo kabsado formatted Photos ka Windows 8
Ma jiraa hab inuu ka soo kabsado sawirada aan formatted ka Windows 8?
Waxaan si buuxda u formatted aan drive adag oo waxaan sawirrada ah oo dhan aan laga badiyay. Ma waxaa jira software in kaban karto, (xitaa haddii ay aad u qaali ah)? BTW, waxaan la isticmaalayo dambeeyay Windows 8. Thanks badan tahay caawimada.
Marka aad qaab drive ay ku adag tahay, xogta badbaadiyey on drive adag dhab ahaantii lama tirtiri doono si degdeg ah. Taasi waa in la yidhaahdo, waxaad si toos ah u arki karaan sawiro asalka ah ee drive ee adag, sababta oo ah waxay tahay sidii aan waxtar lahayn iyo meesha ay degan ayaa lagu calaamadeeyay karo xogta cusub calaamadeeyay. Marka aad ku qorto xogta cusub ee, kuwa xogta formatted baabi'i doontaa weligood. Sidaa darteed, marka aad ka heli xog muhiim ah ka maqan, joojin ku dar macluumaadka cusub si ay u Risaalo ka mid ah ama disk si looga fogaado in xogta lumay lagu overwritten.
De haddaba sidee baan soo kaban karto, kuwa aan run ahaantii photos formatted ka Windows 8? Waxaad u baahan tahay barnaamijka sawir si ay kuu caawiyaan. Aad isticmaalayso Windows 8 on your computer, sidaas barnaamijka waa in la jaan qaada Windows 8. Si fiican u akhri looga baahan yahay nidaamka marka aad go'aansato in aad u soo dejisan. Haddii aadan haysan khiyaar ah, waxaad halkan anigaa iska yeelan karaan: Wondershare Photo Recovery , kaas oo si fiican u la shaqeeya Windows 8 oo kuu ogolaanaya in aad ka bogsato sawirada formatted ka Windows 8 fudayd.
Download version maxkamad free of this Windows 8 sawir formatted kabashada qalab hoose si aad u leeyihiin isku day ah. Xusuusnow in aadan kala soo bixi oo ku xidh on Risaalo ka asalka ah meesha aad sawiro aad lumiyeen waqtigaas ka hor.
Marka bilaabay sawir kabashada qalab formatted on your computer, waxaad heli doontaa daaqad weyn ee hoos ku qoran. Guji "Start" si ay u bilaabaan Windows 8 kabashada sawir formatted.
Laba tallaabooyin ay ku soo kabsadaan photos formatted ka Windows 8
Tallaabada 1. Sawirka Risaalo meesha photos formatted ayaa ku badbaadiyey ka hor
Marka dhan qoruhu ku wadid aad u adag waxaa la helay iyo bandhigay, dooro mid ka mid ah halkaas oo aad sawiro formatted ayaa ku badbaadiyey ka hor oo guji "Scan" si aad u ogaato kuwa formatted, laakiin ma uusan noqon photos overwritten.
Tallaabada 2. Kulanka Xiisaha Leh ceshan formatted sawiro ka Windows 8
Scan ka dib, dhammaan faylasha recoverable waxaa laga heli karaa oo soo bandhigay qaybaha cad, sida audio, sawir iyo video. Si aad u soo kabsado photos, doortaan "Photo" category oo aad ku eegaan karo mid kasta oo sawirada ka hor soo kabashada. Waxaad calaameysaa kuwa aad rabto in aad soo kabsadaan oo guji "Ladnaansho", waxaad iyaga ku badbaadin karaan on your computer ka mid ah.
Haddii aad isticmaalayso version maxkamad lacag la'aan ah ama aad rabto in aad soo kabsado xogta ka dib, ma iloobin si loo badbaadiyo natiijada scan adigoo gujinaya ee "Save Scan" badhanka hoose bidix. Later, aad si toos ah u soo kaban karto xogta, kuwaas oo ay soo degida natiijada baaritaan aan dhowr mar.